Massachusetts Gubashada Xayawaanka iyo Gawaarida
Goobaha loo yaqaan "Leaf Peepers": Massachusetts
Massachusetts Inns iyo Hoteellada si aad u tixgeliso Socodkaaga Socodka Duufaanta
Massachusetts waxay bixisaa abaalmarin ikhtiyaari ah oo loogu talagalay dadka caleenka jecel ee raadinaya inay joogaan oo ciyaaraan. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah Massachusetts oo soo dhejiyay fikrado fasax oo ay ku jiraan hudheelada, hudheellada iyo B & Bs oo bixiya baakidhaha dayrta:
Waa mid ka mid ah hoyga ugu wanaagsan ee dhammaan Massachusetts, oo ay kor u kacdo marka caleemaha ay sameeyaan. About.com 's Honeymoons & Khibradda Dalxiiska Romantic Susan Breslow Sardoon waxay naga qaadataa hudheelkan taariikhiga ah, taas oo u qalantaa xilliga xilliga dayrta dhoobo.
Waxay ku taallaa Lenox oo ku taalla bartamaha Berkshires, Brook Farm Inn waa B & B Victorian halkaas oo martida lagu daaweeyo shaaha Ingiriis ah galab kasta. Weydii sicirka xilliga cagaarka.
Guriga Cambridge B & B
Haddii aad raadinayso saldhig guri oo laga yaabo in uu Boston ku soo baadho xilliga dayrta, waxaad dareemi doontaa guriga guriga A Cambridge House. Buuggan yaryar waxaa loo yaqaan "Gobalka Boston ee ugu wanaagsan" by Country Inns Magazine .
The Berkshires ee galbeedka Massachusetts waa mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan ee caleenta gobolka, iyo safarrada qoysaska, hudheelka suurtagalka ah ee leh qaboojiyaha biyaha kulul ee daboolan waa doorasho fiican.
Cobble View View Bed and Breakfast
Ma xiiseynayaan in aad sameysid qaar ka mid ah muraayadaha madaarka Massachusetts? Berkshires B & B waxay ku taallaa meel fog oo ku lug leh Appalachian Trail.
Guruubka Dancing Bear
Baasaboorka Fiktooriya ee B & B ee Shelburne Falls, Massachusetts, waxay ku habboon tahay Trawwo Mohawk iyo meel fiican oo lagu nasto ka dib maalin dheer oo aad u eegto caleemo.
Deerfield Inn waa meesha ugu fiican ee la joogayo inta aad raadineyso taariikhda Old Deerfield. Sida laga soo xigtay Eleanor Berman kitaabkeeda buuggeeda ee loogu talagalay Usbuuca Weekend New York , "Dad badan ayaa tixgeliya jidadka Old Deerfield, Massachusetts, ugu jecel yihiin dhammaan New England - oo waxaad ka heli doontaa waqtigeeda ugu fiican xilliga dayrta."
Halka Kemble Inn ee Lenox, Massachusetts, waxay hoos u dhigeysaa heerarkeeda marka caleemaha xajmiga xajmiga ku wareegsan. Dooro mid ka mid ah 13 suudaan oo quruxsan: Mid waliba wuxuu leeyahay qaabab kala duwan, sida dabka gubanaya ama labo qof oo Jacuzzi ah. Raashinka ayaa jecel in hudheelka hudheellada, Ron Reda, uu ahaa Bill Clinton oo ah hoyga Aqalka Cad.
Waxay ku taallaa Sudbury, Massachusetts, hudheelkan taariikhiga ah ayaa soo dhaweeyay martida tan iyo 1716-kii. Marka laga hadlo suugaanta suugaanta, oo ay ku jiraan gabayada Henry Wadsworth Longfellow, waxay hadda bixisaa jawi deggan oo marti ah. Ku raaxeyso casho dabka ka hor inta ka fariisin maalin ka dib maalinta caleenta caleen ee Merrimack Valley.
Qaar badan oo ka mid ah sawirada Mareykanka ee Norman Rockwell ayaa waxa uu dhiirrigeliyay deriskooda Stockbridge. Maxay tahay meel aad u fiican in aad qabatid sharraxaadda dhicitaanka ee burushkaaga, kamarad, qalin ama indho.
Dayrtaada ee Xarunta Cusub ee England
Ma raadineysaa waxyaabo badan oo cusub oo caleenta cagaaran ah ee New England? Ka bilaw New England Foliage Central , halkaas oo aad ka heli doonto dhammaan wixii aad u baahan tahay si aad u qorsheyso xasilooni xasuusto xasilloon.
10 New England Halloween Guryaha Guryaha iyo Soojiidashada
Sida Loogu Sameeyo Dhuxusha Badan ee Tanglewood
Worcester Gay Pride 2016 - Bartamaha Massachusetts Gay Pride 2016
Nantucket Photo Gallery: Nantucket ee guga
Bridge of ubax
9 Neatest Northampton Shops
Hagahaaga Muhiimka ah ee Helitaanka E-Visa ee Hindiya
Inta badan Dukaamada Caanka ah ee Memphis
Xeerarka booqashada Machu Picchu
Makhaayadaha Castro ee ugu Fiican
10ka Naxariista ugu Dheer ee Badan ee Denver
Cimilada Xilliga Qaboobaha (Winter Horse-Drawn) Sleigh Ride ee Western Pennsylvania
Dhacdooyinka sannadlaha ah ee Nashville
Hadda waxay u fududahay Baaskiilada Dagaalka ee Scotland
Boosaska ugu wanaagsan ee lagu daawado ciyaaraha Olimbikada ee Rio
Ku safrida Cancun ee Mexico
Sidee u Arkaan 'Ameerikaanka Wanaagsan' ee Magaalada New York?
Tilmaamaha Soo-booqdaha Tilmaamaha: Waxa la sameeyo iyo Arag